Ukuphupha kwezinto Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Xa bethetha ngezinto, bahlala bebhekisa kwizinto ezine umlilo, amanzi, umhlaba nomoya. Akukho nto inokubakho ngaphandle kwenye. Kwithiyori yezinto ezi-4, kwahlulwa phakathi kwezinto ezimbini eziphezulu kunye nezimbini ezisezantsi. Izinto eziphezulu zikwabizwa ngokuba zezasezulwini. Abaphatheki kwaye bafuna umlilo kunye nomoya. Amacandelo amabini asezantsi omhlaba ngumhlaba namanzi, aphathekayo kwaye ke ngawasemhlabeni.
Ibango lokuqala malunga nezinto ezine kukuba bonke ubukho bunemvelaphi yabo. Ukuziphatha okwahlukileyo kunye nobume bobume babelwe into nganye. Nangona kunjalo, umntu akaze anxibe elinye lala malungu mane. Iindidi ezi-4 zezinto zimanyene kuyo, enye yomelele kwaye enye ibuthathaka. Umzekelo, kubandakanya iimpawu zomntu okanye ubume bomntu.
Izinto ezine azimiseli kuphela i-microcosm, okt umzimba wethu, kodwa zisebenza nakwi-macrocosm, Oko kukuthi, kuyo yonke into el mundo esingqongileyo.
Kwangelo xesha, i-chemistry ithetha ngezinto ezirekhodwe kwitheyibhile yamaxesha, uhlobo lwenkcazo yeskim. Into yemichiza yinto esulungekileyo engenakubola, kodwa inokusabela kunye nezinye izinto ukwenza into entsha, ikhemikhali. I-H2O, ifomula yamanzi, ngokungathandabuzekiyo yeyona mpendulo iyaziwayo: apha ezi zinto zimbini i-hydrogen (H) kunye neoksijini (O) zidibene kunye.
Ukuba ubone izinto ezinje ngeegesi kunye nezinyithi okanye izinto ezihlanganisiweyo ephupheni, uyakufumana intsingiselo yazo kwisichazi-magama sethu sephupha. Chwetheza nje isimboli yamaphupha oyikhangeleyo kwibar yokukhangela phezulu ngasekunene kweli phepha.
Emva koko, sijonga ngakumbi intsingiselo yezinto ezine zomlilo, amanzi, umoya kunye nomhlaba ekutolikeni amaphupha.
1 "Izinto ezisisiseko" zesimboli yephupha - ukutolikwa ngokubanzi
2 "Izinto ezisisiseko" zesimboli yephupha-ukutolikwa kwengqondo
3 "Izinto ezisisiseko" zesimboli yephupha - ukutolikwa kokomoya
"Izinto ezisisiseko" zesimboli yephupha - ukutolikwa ngokubanzi
Ngaba liphupha malunga nezinto ze Fuego, ukutolikwa kwamaphupha kukwahlula ukubonakaliswa okubini. Ukuba ngumlilo ovuthayo olawulwayo, ngumntu onobuchule osetyenziselwa ukwenza ngokukhawuleza nangokuzimeleyo ekwakheni ubomi bakhe. Kanye njengokuba umlilo ulawulwa, unokuhlala elawula ulawulo ukugcina. Ayinamsebenzi ukuba injani imeko.
Nangona kunjalo, ukuba umlilo wasendle ungumxholo wamava ephupha, oku kubonisa ukuba ndlongondlongo, umsindo kunye nentshabalalo. Ukugqithiselwa kumntu ophuphayo, oko kunokuthetha ukuba naye unjalo Ukuziphatha okungxamisekileyo ithambekele kwaye inako "ukutshisa iminwe" ngokukhawuleza ngokwenza izinto ngokungxama. Umlilo ovuthayo, kodwa, ukwabonisa ukuzinikela okunzulu kunye nokukwazi ukuthanda ukuthanda.
Es mhlabeni Enye yezinto, ekuxoxwa ngazo ephupheni, kukhuseleko kunye nozinzo lwezinto eziphambili zephupha lobomi bakho. Umhlaba sisiseko sobukho bakho, iinzame zakho, ukukhula Kuya kufezekiswa ngenkuthalo nokuzingisa. Abantu abangabodidi lwasemhlabeni ngokwemfundiso yezinto ezi-4 kuthiwa banomonde kwaye banoxolo. Nangona kunjalo, kukho icala elingezantsi apha, kuba ngamanye amaxesha ukusondela emhlabeni kukwabonisa ngeenkani nangokuzingisa kwiimbono ezindala neziphelelwe lixesha.
Omnye amaphupha ezinto ngaphakathi kwiphupha lezinto ezine. indawo, umntu angathanda ukuba neminqweno emihle ebomini bokuvuka, kodwa kubonakala kungenakwenzeka, kungaphatheki. Ukuphupha kuyakuthanda Iinqaba ezisemoyeni ukwakha. Umoya uhlala ukhatshwa yimvakalelo yenkululeko, kuba akukho mida kwintelekelelo. Umoya ukwagqwesa kutoliko lokuphupha lokucaca kunye nokuhamba. Abantu bomoya bazalwa zi-theorists. Bathanda ukucinga kunye nefilosofi.
Okokugqibela kwezinto ezi-4 kukuba amanzi. Ibhinqa linikezelwe kuye ekuchazeni amaphupha. Ke ngoko, naziphi na iimpawu okanye iimpawu esizidibanisa nobufazi. Ukuphupha, iphupha lezinto ezinamanzi linokuthetha ukuba umxholo wobomi bakho wawuchatshazelwe ngamandla ngumama. Rhoqo, kukho ukungqubana nomama okukhathaza loo mntu kuthethwa ngaye kwaye asebenze naye ngengqondo.
Amanzi njengesixhobo nawo abandakanya isimo sengqondo esibi zomntu ophuphayo. Njengokuba umphezulu wamanzi ungaze ubonakale ngokufanayo, amaphupha nawo anobuso obahlukeneyo.
"Izinto ezisisiseko" zesimboli yephupha-ukutolikwa kwengqondo
Ewe inokwenzeka nakwilizwe lamaphupha umntu ephupha izinto ezininzi ze-4. Umphuphi mhlawumbi ngumntu ohlala ezama ukucinga ngabanye abantu. Ubuza kwaye uhlalutye indlela yokuziphatha kunye nembono yabanye, kodwa oku kunokuhlala kukhokelela ekubeni uzibuze ngokwakho kunye nehlabathi ngokubanzi.
Kwinqanaba leengqondo, abantu bezinto ezi-4 bahluka ngeendlela ezininzi. Umntu osondele emlilweni uthanda ukuvelisa izinto ezimnandi kunye nezandi ezivakalayo. Iimpikiswano. Iqhuma ngemizuzwana, enokuthi iphazamise abantu ongabaziyo ekuqaleni. Nangona kunjalo, emva kwalo mlilo weemvakalelo, umsi uyanyamalala kwakhona ngokukhawuleza okukhulu kwaye nawo uhlala usisiqalo.
Umntu wamanzi, kwelinye icala, uyathanda ukuntywila iingxaki ngotywala okanye ukuntywila kulwandle lweenyembezi. Unokuthi unemvakalelo "Yakhiwe kufutshane namanzi".
Ukuba umfanekiso wamaphupha wezinto ezine umalunga nomoya, umntu ophuphayo unendlela yakhe yokujongana neemeko ezinobunzima ebomini bokuvuka. Iingxaki ukuphupha kunokubenza bafe ngokumangalisayo, beqhekeza izinto zomlomo de ube uziva ngathi ubasusile. Nokuba ngaba sele bekwenzile njengomphunga okanye hayi ngokwenene kungabaluleka kwesi sithuba ngeli xesha. Yintoni ebalulekileyo kuye ubuncinci yimvakalelo yexeshana yokukhululeka.
Uhlobo lwabantu abasemhlabeni bayathanda ukungcwaba iingxaki zabo kwaye banethemba lokuba baya kuzisombulula. Phezulu oku kubonakala kusebenza nayo, kodwa i-subconscious yakho iya kuqhubeka nokutsalela ingqalelo kwinto yokuba isekhona into ekufanele ukuba uyasebenza kuyo. Isixhobo somhlaba sihlala sabelwa ukutolikwa kwamaphupha kubantu abanobunzima bokulahla i-ballast endala kunye nokuvula izinto ezintsha.
"Izinto ezisisiseko" zesimboli yephupha - ukutolikwa kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, izinto zimela oko Indalo nesiqalo sayo yonke into ekhoyo.